BFV-SG : 20 taona nanakaiky ny mpanjifa | NewsMada
BFV-SG : 20 taona nanakaiky ny mpanjifa
Nankalazaina tany Toamasina ny faha-20 taona ny banky BFV-SG eto Madagasikara. Nilaza ny PDG, Bruno Massez, fa antony nisafidianan’ity tanàna ity ny nisokafan’ny toerana manokana ho an’ny fandraharahana ankoatra ny eto Antananarivo. Masoivoho vaovao farany nisokatra ho an’ny fandraharahana ny eny Talatamaty.
“Tsapa ankehitriny, fa mamaly ny filàn’ny mpanjifa ny BFV-SG, toy ny fandraisana andraikitra, ny fanekena, ny firaisankina amin’ny asa ary fikarohana hatrany zava-baovao”, hoy ihany izy.
Tao anatin’izay 20 taona izay, nataon’ity banky ity laharam-pahamehana ny fanomezana tolotra sahaza ny sokajina mpanjifa, miainga any amin’ny olon-tsotra, ny mpiasa isam-bolana, ny mpandraharaha eto an-toerana sy any ivelany, ny orinasa madinika sy salantsalany ary ny vaventy, sns. Ho an’ny BFV-SG, tanjona ny fanomezana sehatra azy ireny avy, ahafahany manitatra ny ambahindain’ny fihariany avy.
Dingana manaraka ny hanamafisana ny hanohizana ny mangarahara, ny fanakaikezana ny mpanjifa, fihainoana azy ireny, ny fametrahana fifandraisana maharitra eo amin’ny roa tonta ary ny fanajana ny kalitao. Hohamafisina koa ny fanohanana sy fanomezan-danja ny lafiny kolontsaina malagasy.
Nomarihin’ny PDG koa ny firaisam-pon’ny banky ka nanampy sy nanohana ireo traboina vokatry ny rivodoza Ava amin’ny alalan’ny fanomezana natolotra hotantanin’ny BNGRC.